Deadline: 2021 McKnight Technology Awards - McKnight Foundation
Qeybta:Ogaysiiska3 min akhris
Wakhtiga kama dambaysta ah: 2021 Abaalmarinta Teknolojiyada McKnight
Sanduuqa 'McKnight Endowment Fund for Neuroscience' wuxuu taageeraa cilmi baaris casri ah oo loogu talagalay in sayniska loogu dhawaado maalinta cudurrada maskaxda si sax ah loo ogaan karo, looga hortagi karo, loona daaweyn karo. Ujeeddadan, Sanduuqa 'McKnight Endowment Fund for Neuroscience' wuxuu ku martiqaadayaa waraaqaha ujeeddada loogu talagalay abaalmarinta 2021 McKnight Technological Innovation ee abaalmarinta Neuroscience.
Isticmaalka Miisaaniyadda Lacagta
Abaalmarinnadan ayaa dhiirrigelisa oo taageerta saynisyahannada ka shaqeeya horumarinta sheeko xariirooyin iyo hal abuur leh oo lagu fahmo shaqada maskaxda. Sanduuqa Endowment ayaa xiiseynaya sida tikniyoolajiyad cusub loo istcimaalayo in lagula socdo, loo maareeyo, loo falanqeeyo, ama lagu daydo shaqada maskaxda heer kasta, min-moolo ilaa unugyada oo dhan. Teknolojiyaddu waxay qaadan kartaa nooc kasta, laga bilaabo aaladaha kiimikaad ilaa aaladaha ilaa softiweerka iyo qaababka xisaabaadka Sababta oo ah barnaamijku wuxuu raadinayaa inuu horay u sii qaado oo ballaariyo tikniyoolajiyada kaladuwan ee laga heli karo neerfaha, cilmi baaris ku saleysan asaasiga ah farsamooyinka jira looma tixgelin doono.
Hadaf ka mid ah abaalmarinada tikniyoolajiyada ayaa ah in la kobciyo wadashaqeynta u dhaxeysa neerfaha iyo cilmiga kale; sidaa darteed, codsiyada wadashaqeynta iyo iskuulada edbinta ah ayaa si cad loogu casuumay. Faahfaahinta abaalmarino hore, Booqo abaalmarinadii hore.
Codsadeyaashu waa inay ka shaqeeyaan machadyada aan macaash doonka ahayn ee Maraykanka gudihiisa ah waana inay qabtaan ballamo waqti-buuxa ah oo ku saabsan darajada kaaliyaha borofisar ama ka sarreeya, tusaale ahaan borofisar ku-xigeenka ama borofisar Seynisyahanada heysta cinwaano kale sida borofisar cilmi baaris, borofisar ku takhasusay, raadinta cilmi baarista borofisarka, borofisarka booqashada, ama macalinka xaq uma laha. Lacagta waxaa loo isticmaali karaa howlo kala duwan oo cilmi baaris ah, laakiin ma ahan mushahar qaataha. Codsadayaashu ma noqon karaan shaqaale gudaha ka shaqeeya sida kuwa ka jira Machadka Allen, Machadyada Qaranka ee Caafimaadka, Howard Hughes Medical Institute iyo machadyada la midka ah, mana qaban karaan nooc kale oo ah Sanduuqa 'McKnight Endowment Fund for Neuroscience Award' oo ku soo laaban doona Abaalmarinta Tiknoolajiyadda.
Waxaa jira hanaan xulasho laba-marxaladood ah, oo ka bilaabanaya warqad ujeeddo (LOI). Guddiga xulashada ayaa dib u eegi doona LOIs waxayna ku casuumi doonaan dhowr codsadeyaal inay soo gudbiyaan soo jeedin buuxda oo lagu qiimeyn doono aasaaska hal-abuurka, faa'iidada ay leedahay habka cusub, iyo muhiimada dhibaatooyinka wax laga qabanayo. Ilaa saddex abaalmarin ayaa la sameeyaa sanadkiiba, mid walbana wuxuu siiyaa $100,000 sanadkiiba laba sano. LOIs waxay ku egtahay Diseembar 7, 2020 (saqbadhkii aagga waqtiga ugu dambeeya ee dhulka). Soo jeedinta oo dhameystiran waxay noqon doontaa Abril 26, 2021, maalgalintuna waxay bilaabmi doontaa 1da Ogast, 2021.
Tallaabada koowaad: riix halkan si aad uhesho Foomka 'LOI Level LOI'. PI waxaa looga baahan doonaa in uu aasaaso magaca isticmaalaha iyo erayga sirta ah (fadlan hayso magacaaga iyo isgarad-ereygaaga sidaad ugu baahan doontid inta hawsha lagu jiro), buuxi waraaqda wejiga tooska ah, soona xajiso faahfaahin laba mashruuc ah oo aan ka badnayn laba bog. tixraacyada; sawirro kasta waa inay ahaadaan xadka laba-bog ah. Sharaxaada mashruuca iyo tixraacyada waa in lagu soo dhejiyaa hal PDF ah. PIs badan, hal PI waa inay buuxisaa foomka LOI; fadlan ku dar dhammaan magacyada PI ee labada bog ee LOI oo ku dar NIH Biosketch baaraha kasta. Dhammaan codsadeyaashu waa inay u habeeyaan boggaga PDF-ga sida soo socota:
Laba bog oo LOI ah
NIH Biosketch ee baare kasta
Finalka waxaa lagu casuumi doonaa emayl ahaan si ay u soo gudbiyaan soo jeedin buuxda; Tilmaamaha soo gudbinta ayaa la bixin doonaa wakhtigaas. Tartanku waa mid aad u kacsan; Codsadeyaasha waa lagu soo dhaweynayaa inay codsadaan wax kabadan hal jeer.
Haddii aadan helin e-mayl xaqiijin ah ee helitaanka LOI-gaaga toddobaad gudihiis markii aad soo gudbisay, fadlan la xiriir Eileen Maler.
Mawduuca: Sanduuqa McKnight Fund for Neuroscience, Abaalmarinta Teknolojiyada
Spectrum | Huda Zoghbi: Qaadashada baaritaanka hidda-socodka illaa heerka xiga
2021 Abaalmarinta Aqoonyahanka McKnight
2022 Neurobiology ee Abaalmarinta Dhibaatooyinka Maskaxda